Nkọwa Meta: Ihe niile ịchọrọ ịma maka SEO
Mgbe ụfọdụ ndị na-ere ahịa anaghị ahụ oke ọhịa maka osisi. Dị ka search engine njikarịcha enweela nlezianya anya n'ime afọ iri gara aga, achọpụtawo m na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya nke ọma n'ọkwá na ahịa ndị na-esote, ha na-echefu usoro nke na-eme n'etiti. Nchọgharị ọchụchọ dị oke mkpa na azụmaahịa ọ bụla 'ịchụpụ ndị ọrụ nwere ebumnuche na ibe gị na saịtị nke na-azụ ebumnuche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Na meta nkọwa bụ gị ohere dịkwuo mkpa click-site udu si search engine site na gị na peeji nke.
Kedu ihe bụ Meta Description?
Nchọgharị ọchụchọ na-enye ndị nwe saịtị ohere ka ha dee nkọwa banyere ibe ahụ aripụrụ ma nyefee ya na ngwa nyocha ha gosipụtara n'ime peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ (SERP). Nchọpụta ọchụchọ na-ejikarị ihe mbụ 155 gaa na 160 nke nkọwa meta gị maka nsonaazụ desktọọpụ ma nwee ike belata mkpụrụedemede 120 maka ndị ọrụ injinia ekwentị mkpanaaka. Nkọwa ndị Meta anaghị ahụ onye na-agụ peeji gị, naanị ndị na-egwu craw.
Ihe meta nkọwa dị na akụkụ nke HTML ma hazie ya dị ka ndị a:
<meta aha="nkọwa" content="Publicationlọ ọrụ ụlọ ọrụ Martech na - eduga maka nyocha, ịchọpụta, yana ịmụ etu esi eji usoro azụmaahịa na azụmaahịa na teknụzụ bulie azụmaahịa gị."/>
Kedu ka esi eji nkọwa Meta eme ihe na Snippets?
Ka anyị lelee nke a site na echiche abụọ dị iche… igwe nyocha na onye ọrụ ọchụchọ:
Igwe nyocha na-achọta ibe gị, ma ọ bụ site na njikọ dị na mpụga, njikọ dị n'ime, ma ọ bụ map saịtị gị ka ọ na-ama weebụ.
Igwe nyocha ahụ na-agbaji ibe gị, na-a attentiona ntị na aha, isi, akụ mgbasa ozi, na ọdịnaya, iji chọpụta isiokwu ndị dị mkpa maka ọdịnaya gị. Rịba ama na m na-agụnyeghị meta nkọwa na nke a… search maqbx chekwebe idịghe ekwukwa ederede na a meta nkọwa mgbe ị na-ekpebi otú ndeksi na peeji nke.
Igwe nyocha na - etinye aha peeji gị na peeji nsonaazụ igwe nchọta (SERP) ntinye.
Ọ bụrụ na ị nyela nkọwapụta meta, igwe nchọ na-ebipụta nke ahụ dịka nkọwa n’okpuru ntinye SERP gị. Ọ bụrụ na inyebeghị nkọwapụta meta, igwe ihe nchọta na-akọwapụta nsonaazụ ya na ahịrịokwu ole na ole ha chere na ọ dị mkpa site na ọdịnaya peeji gị.
Nchọgharị ọchụchọ ahụ kpebiri otu esi ahazi peeji ahụ dabere na mkpa saịtị gị na isiokwu yana ọtụtụ njikọ dị mkpa nke saịtị gị ma ọ bụ ibe gị họọrọ maka usoro ha depụtara gị.
Igwe nyocha nwere ike na-ebikwa gị dabere na ma ọ bụ ndị na-achọ ọchụchọ ndị pịrị na nsonaazụ SERP gị nọrọ na saịtị gị ma ọ bụ laghachi na SERP.
Onye ọrụ ọchụchọ
Onye nyocha na-abanye Keywords ma ọ bụ ajụjụ na nyocha ọchụchọ wee daa na SERP.
Nsonaazụ SERP bụ nke ahaziri, mgbe o kwere omume, na onye ọrụ nchọta ọchụchọ dabere na ọdịdị ala ha na akụkọ ọchụchọ ha.
Onye ọrụ nyocha ahụ na-enyocha aha, URL ahụ, na nkọwa ahụ (e si na meta nkọwa).
Isiokwu (s) onye ọrụ njikwa ihe eji eme ihe pụtara ìhè n'ime nkọwa na nsonaazụ SERP.
Dabere na aha, URL, na nkọwa, onye ọrụ ọchụchọ na-ekpebi ma ọ ga-pịa njikọ gị ma ọ bụ na ọ gaghị.
Onye ọrụ nke pịa na njikọ gị rutere na ibe gị.
Ọ bụrụ na ibe ahụ bara uru na isiokwu maka ọchụchọ ha na-eme, ha na-anọ na ibe ahụ, chọta ozi ha chọrọ, ọbụnakwa nwere ike ịgbanwe.
Ọ bụrụ na ibe ahụ adịghị mkpa na isiokwu maka ọchụchọ ha na-eme, ha laghachi na SERP wee pịa ibe ọzọ… ikekwe onye na-asọ mpi gị.
Ndi Meta Nkọwa Na-emetụta Ọkwa Nchọpụta?
Nke ahụ bụ ajụjụ buru ibu! Google mara ọkwa na Septemba nke afọ 2009 na nkọwapụta meta ma ọ bụ meta Keywords ihe na-akpata Google algorithms ogo maka nchọta weebụ… mana nke ahụ bụ ajụjụ a kapịrị ọnụ nke chọrọ nkwurịta okwu ọzọ. Ọ bụ ezie na okwu na isiokwu dị na nkọwapụta atọ gị agaghị eme ka ị dezie ya, ha na-emetụta omume ndị ọrụ njikwa njikwa ọrụ. Omume onye ọrụ nyocha ihe dị oke egwu na ogo nke ibe gị maka nsonaazụ ọchụchọ a.
Nke bụ eziokwu bụ na ka ndị mmadụ pịrị na peeji gị na-eme ka ohere ha gụọ ma kesaa ibe ahụ. O yikarịrị ka ha ga-agụ ma kesaa ibe ahụ, ka ọkwa gị ka mma. Ya mere… mgbe meta nkowa adịghị emetụta kpọmkwem ogo nke gị na peeji nke na search maqbx chekwebe, ha nnọọ nwere nnukwu mmetụta na onye ọrụ omume… nke bụ isi ogo ihe!
Meta Nkọwa Ihe Nlereanya
A bụ ihe atụ search, maka nkata:
Ana m egosi ihe atụ a maka na ọ bụrụ na mmadụ chọọ “martech”, ha nwere ike bụrụ naanị ihe ha chọrọ bụ martyr, ọ bụghị ịmụtakwu ihe gbasara ya ma ọ bụ ịchọta akwụkwọ. Enwere m obi ụtọ na m nọ ebe ahụ na nsonaazụ kachasị ma ghara ichegbu onwe m na ịkọwapụta nkọwa meta m ga-eme ka ọhụhụ ka ukwuu.
Akụkụ nke akụkụ: Enweghị m peeji a na-akpọ ihe bụ martech? Nke a nwere ike bụrụ oke atụmatụ m ga-eji tinye otu ebe m nọ n'ọkwa dị elu maka oge a.
Gini mere Meta Nkọwa ji dị oke mkpa na atụmatụ ọchụchọ?
Ngini Nchupu - igwe nyocha chọrọ inye ndị ọrụ ha ahụmịhe kachasị elu na nsonaazụ ọchụchọ kacha mma. N'ihi ya, nkọwapụta meta gị dị oke egwu! Ọ bụrụ na ị na-akwalite ọdịnaya gị nke ọma na nkọwapụta atọ gị, rata onye ọrụ nyocha iji gaa na ibe gị, ma debe ha ebe ahụ engines engines na-ekwenyesi ike na ogo gị ma nwedịrị ike ịbawanye ogo gị ma ọ bụrụ na ibe ndị ọzọ nwere ọkwá dị elu na-ebute ndị ọrụ bouncing .
Ndị ọrụ Nchọta - a search engine N'ihi na peeji nke na random ederede banyere site na ọdịnaya nke na peeji nke nwere ike ghara ịrata ndị search engine ọrụ pịa site na gị na peeji nke. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na nkọwa gị adịghị mkpa maka ọdịnaya ọdịnaya peeji ahụ, ha nwere ike ịkwaga na ntinye SERP na-esote.
Imchọpụta nkọwapụta meta bụ ezigbo akụkụ dị mkpa nke SEO na peeji nke n'ihi ihe ole na ole:
Ọdịnaya abụọ - a na-eji nkowa meta mee ihe na mkpebi nke ma ị nwere ọdịnaya abụọ n'ime saịtị gị. Ọ bụrụ na Google kwenyere na ị nwere ibe abụọ nwere ọdịnaya yiri ya na nkọwapụta atọ yiri nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na ha ga-akacha mma peeji kachasị mma ma leghara ndị ọzọ anya. Itinye nkọwa pụrụ iche meta na ibe ọ bụla ga - eme ka ibe ha ghara ịrịọ ma kpebisie ike ịbụ ọdịnaya abụọ.
Keywords - Mgbe Keywords tinye n'ọrụ na nkọwa nke meta etinyela mmetụta na peeji nke gị, mana ha bụ nkwuwa okwu na nsonaazụ ọchụchọ, na-adọrọ uche ụfọdụ na nsonaazụ.
Pịa-Site ọnụego - Nkọwa meta bụ ihe dị oke mkpa iji gbanwee onye ọrụ njikwa ihe nchọgharị na onye ọbịa nke saịtị gị. Anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ iji hụ na nkọwapụta meta ha na-adọrọ adọrọ na onye ọrụ nyocha ọchụchọ, yana itinye Keywords dị ka isi nke abụọ. O ha n ’uda olu gi ime ka mmadu mee ihe.
Ndụmọdụ maka imchọpụta Meta Nkọwa:
Nzuzo dị oke egwu. Site na nyocha ekwentị na ịrị elu, gbalịa izere nkọwa meta nke karịrị ihe odide 120 n'ogologo.
zere oyiri meta nkọwa gafee saịtị gị. Nkọwa ọ bụla meta ga-adị iche, ma ọ bụghị ya, igwe nyocha ahụ nwere ike ileghara ya anya.
Ahu nagide nkebi ahịrịokwu nke ahụ na-eme ka onye na-agụ ya mara ihe ma ọ bụ na-enye iwu ka ha mee. Ebumnuche ebe a bụ ịkwọ onye ahụ ka ọ pịa na ibe gị.
Zere njikọbait meta nkọwa. Ndị ọrụ na-emechu gị ihu site n'ime ka ha pịa site na ịchọtaghị ozi ị kọwara bụ omume azụmaahịa jọgburu onwe ya nke ga-emebi ikike gị itinye aka na ịgbanwe ndị ọbịa njin ọchụchọ.
mgbe Keywords agagh aga enyere aka ogo gi aka, mana ha g’enyere aka ighaputa gi ebe o bu na Keywords putara ihe ka onye nyocha ihe n’acho ihe. Gbalịa iji isiokwu ndị dị nso na mkpụrụ okwu mbụ na nkọwapụta meta.
Nyochaa ma ogo gị na pịa gị udu… ma dozie nkowa meta gi ka iwelie okporo-uzo di nkpa na ntughari! Gbalịa ụfọdụ ule A / B ebe ị na-emelite nkọwa meta gị maka otu ọnwa wee hụ ma ị nwere ike ịbawanye mgbanwe.
Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya Gị na Meta Nkọwa
Ma ị na-eji Squarespace, WordPress, Drupal, ma ọ bụ ọzọ CMS, hụ na ha nwere ikike ịgbanwe nkọwa meta gị. N'ọtụtụ nyiwe, mpaghara nkọwa meta anaghị apụta nke ọma yabụ na ị ga -achọ ya. Maka WordPress, Ọkwa Math bụ anyị nkwanye ọ na-enye onye ọrụ nnukwu nlele nke nkọwapụta meta dị ka elele ya na desktọọpụ ma ọ bụ mkpanaka.
Oge ọ bụla ị bipụtara peeji ma ọ bụ chọọ ịkwalite ya, m ga-emejuputa njikarịcha nkọwapụta meta n'ime usoro iji bulie ọnụọgụ ịpị gị site na ịkwanye ndị ọrụ injinia ọchụchọ na-aga ahịa gị.
Tags: pịa-site ọnụegoọdịnaya abụọogologo oge ka meta nkọwaole ederede bụ meta nkọwaisiokwu ojijiKeywordsnkọwa nkọwameta nkọwa ogologonkọwa nke metameta KeywordsagwoAtụmatụ maka ịmepụta meta nkọwa
Aug 14, 2010 na 8: 57 AM
Akwa aro. Otu n'ime ọkacha mmasị m ngwaọrụ maka WordPress All-in-One SEO na-enye anyị ohere ịmepụta peeji dị mfe tiltes na nkọwa na-enweghị ihe ọmụma banyere nzuzo. (Site n'ụzọ, ị kpọbatara anyị All-in-One) ya mere na ekele na ọnụọgụ abụọ.
Aug 14, 2010 na 11: 23 AM
Lorraine, AIOS na Google XML Sitemaps bụ 'abụọ m ga-enwe' maka saịtị WordPress ọ bụla. O juru m anya na WordPress etinyebeghị ha n'ime koodu isi n'oge a. WordPress naanị na-eme ka ị ruo 75% ebe ahụ…. ndị plugins na-enweta gị n'elu ikpo okwu n'ụzọ zuru ezu nyeere!
Mee 17, 2013 na 2: 41 PM
Ọnọdụ dị egwu dị ka mgbe niile! Anọ m na-ekwu banyere nke a n'izu mbụ na ndị otu. Daalụ Doug.
Mee 17, 2013 na 2: 44 PM
Daalụ @jrdorkin: disqus!
Mee 18, 2017 na 6: 35 PM
Ọ ga-eju m anya ịhụ onye dị oke mkpa maka ịkwalite ọdịnaya ha na weebụsaịtị enweghị nkọwa meta. Mgbe mụ na ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ, m na-agwa ha na nkọwapụta meta bụ ahụ nke ọkwa ọkwa ha na Google. You ga-anwa ire ihe n’akwụkwọ akụkọ gị na-enweghị nkọwa nke ihe ahụ? Ọ bụghị n'ezie!
Mee 19, 2017 na 8: 29 AM